Sheikh Mukhtaar Roobow oo gurmad ka helay dowladda iyo jab uu gaarsiiyay Shabaab – Warfaafiye:
Sheikh Mukhtaar Roobow oo gurmad ka helay dowladda iyo jab uu gaarsiiyay Shabaab
Wararka laga helaayo deegaanka Abal oo ka tirsan gobolka Bakool saakay xaalada degaankaasi tahay mid degan, kadib dagaal xooggan oo shalay maliishiyada Shabaab ku qaadeen Sheekh Muqtaar Roobow “Abuu Mansuur” oo fariisin u ah halkaasi.
Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo degaanka Abal ayaa sheegaya in maliishiyadii Al-Shabaabkii ee weerarka soo qaaday ay dib u gurasho sameeyeen, kuna laabteen degaanka Labaatan Jirow oo markii hore ay ka soo duuleen.
Abuu Mansuur Roobow ayaa iska difaacay weerarka kaga yimid Al-Shabaab, waxaana la sheegay in khasaare dhimasho iyo dhaawac badan uu gaarsiiyay kooxdii weerarka soo qaatay, waxaana hadda Abal gaaray ciidamo ka socda dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed.
Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya C/risaaq Cabdi ayaa sheegay ujeedka ay halkaasi u gaareen Ciidamada in uu yahay sidii ay garab Millitari u siin lahaayeen Sheekh Muqtaar Roobow oo Shabaab ay soo weerareen.
“Ciidamada hada waxa ay ku sugan yihiin degaanka Abal iyo hareerahiisa, waxayna ku sii socdaan dhulka buuraleyda ah ee Dagaalka uu ka dhacayo, arrintan dhacday ayay u imaadeen Ciidamada, si xaalada meesha ka jirta ay wax uga qabtaan, ugana hortagaan kooxaha weerarka soo qaaday”. Ayuu yiri Wasiir ku xigeenka Amniga Koonfur Galbeed.
Mareykanka ayaa dhawaan liiska waxa loogu yeero argagixisada wuxuu ka saaray Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo ah hadda Sarkaal ka madax Banaan Ururka Al Shabaab.